Mivelona amin’ny mozika : Mbola tsy mieritreritra ny hanao politika i Stéphanie
06/04/2018 admintriatra 0
Andriambavilanitra mpanakanto manana ny lazany amin’izao fotoana. Mbola miaina sy mivelona amin’ny mozika amin’izao fotoana ka mbola tsy mieritreritra ny hanao politika i Stéphanie. Ho an’ity mpanakanto fantatra tamin’ilay hira « Tsy misy rohirohy » …Tohiny
AIZA NO ALEHA : Kianjan’ny kanto – Mahamasina
Hanotrona ny Rindra Tarika i Njakatiana Tarika isan’ny zandriny nefa efa manana ny lazany. Ao anatin’ny fankalazan’izy ireo ny faha-2 taonany, hanolotra seho takariva etsy amin’ny kianjan’ny kanto Mahamasina anio alina manomboka amin’ny 9 ora …Tohiny
Rivo Rakotovao : « Tsy matahotra ny fangaraharahana ny HVM »
Nosokafana tmin’ny fomba ôfisialy omaly ny fivoriana tsy ara-potoana fahefatra teny amin’ny Antenimieran-doholona. Tonga nanotrona izany ny mpikambana teo anivon’ny governemanta notarihin’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier. Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny filohan’ny Antenimieran-doholona, Rivo Rakotovao, tamin’ny …Tohiny
Mahajanga : Ravan’ny polisy ny andiam-behivavy mpanaparitaka vola sandoka
Saron’ny polisy tao anatin’ny trano fisotroan-toaka iray tany Tsaramandroso Mahajanga, ny alahadin’ny paska lasa teo ny andiam-behivavy mpanaparitaka vola sandoka any an-toerana. Araka ny loharanom-baovao, dia nanjifa zava-pisotro toa ny mpividy rehetra ireto farany. Rehefa …Tohiny
Fifandresen-dahatra mivantana sy fifanatonana kokoa amin’ ny vahoaka malagasy, amin’ ny alalan’ ny fitetezan-trano, na « porte à porte » no paikady entin’ny kandidà Ravalomanana Marc handresen-dahatra ny mpifidy amin’ ity fifidianana dingana faharoa ity. ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Hivory miaraka amin’ny biraon’ny OIF
Fitrandrahana harena an-kibon’ny tany : NY FITONDRANA TETEZAMITA NO NAMPANJAKA NY GABORARAKA